Gargaar News | Odayaasha iyo Cuqaasha beesha Sacad Gaar ahaan Beesha Odow oo shaaciyay in uu fashilmey shirkoodii ay kusoo gudbin lahaayeen Ergada Jufo walba u matalaysa Doorashada Xildhibaanada Somalia.
Posted on October 9, 2016 by Laylo Mahamud	Odayaasha iyo Cuqaasha beesha Sacad Gaar ahaan Beesha Odow oo shaaciyay in uu fashilmey shirkoodii ay kusoo gudbin lahaayeen Ergada Jufo walba u matalaysa Doorashada Xildhibaanada Somalia.
Odayaasha iyo Cuqaasha beesha Sacad Gaar ahaan Beesha Odow ayaa sheegay in uu fashilmey shir maalmahan Galkacyo uga socdey wax garadka Beesha oo la doonayey in ay beeshu ku soo gudbiso liiska Ergada Jufo walba u matalaysa Doorashada Xildhibaanada Somalia.
Fashilka soo xulista Ergada ayaa beeshu ku eedaysay in uu ka dambeeyo Garaad Aaadan Qoorwayne oo ah xubinta beesha ugu jirta 130ka oday ee soo xulaya Baarlamaanka soomalia oo dhawaan la filayo in Doorashadoodu ka dhacdo Caasimadaha Maamul Goboleedyada dalka.
Odayaasha waxey kaloo ku Eeedeeyen Garaad Aadan in uu diidey Liiska Ergada Jufooyinka qaar Gaar ahaan Jufooyinka Reer Maxamed iyo Reer Cabdi oo isagu uu qortey Liis Jeebkiisa ah oo aysan la socon Nabadoonada Jufooyinkaas.
Sidoo kale waxay Odayaashu sheegeen in si cad uu Garaad Aadan ugu Olallaynayo mid ka mid ah xildhibaanada u tartamaya Kuraasta Baarlamaanka oo uu Adeer u yahey, sidaa darteedna uu uu u qortey Ergo uu suuqa ka qortey si ay ugu codeeyaan Musharaxa uu wato.
Odayaasha ayaa sheegay in garaad aadan uu maanta cadaado la tegay liis been abuur abuur ah oo aanay waxba kajirin beeshana khusayn .